Fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Japon
Izao fotoana izao any Japon
Toetrandro sy toetrandro
Horohoron-tany & Volkano
Tranonkala mifandraika amin'i Japana
Fiainana sy kolontsaina
Harmony miaraka amin'ny natiora
Vanim-potoana tany Japon
Mampianatra antsika ny "Mujo" ny natiora
Ny akanjo ririnina any Japon
Ny akanjo ririnina any Hokkaido
Lohataona Lohataona tany Japon
Ireo fitafy fahavaratra tany Japon
Fararano fararano any Japon
Harmony amin'ny olona
Fomba sy fanao
Lalao Japoney Japoney
Sary: mariazy japoney
Saripika: Kolontsaina volontany
Saripika: Famolavolana jiro any Japon
Sary: fiara Kei
Tapak sy fitsangatsanganana
Biby sy trondro
Tempoly sy raisy
Asa tanana nentim-paharazana
Itineraries tsara indrindra
Manodidina an'i Tokyo
Ny prefektioran'i Hiroshima
Hotely sy Ryokan
Shinkansen (lamasinina Bullet)
Seranam-piaramanidina Chitose vaovao
Fotoana mahafinaritra, fiainana sy kolontsaina
Tongasoa eto Japon!
Tsindrio ny tanàna, prefecture, na faritra hijerena ilay lahatsoratra. Raha tsy afaka manindry ny sarintany ianao, azafady tsindrio ny bokotra eto ambany ary safidio ny tanàna, prefecture na faritra tianao hojerena.
Faritra sy prefektiora
Sary: Tempolin'i Kiyomizudera tao Kyoto
Ny toerana fizahan-tany malaza indrindra ao Kyoto dia ny Foiben'ny Fushimi Inari Shrine, Tempolin'i Kinkakuji ary Tempolin'i Kiyomizudera. Ny Tempolin'i Kiyomizudera dia miorina eo amin'ny tehezan-tendrombohitra any amin'ny ilany atsinanan'ny tanànan'i Kyoto, ary mahavariana ny fahitana avy amin'ny efitrano lehibe, izay mirefy 18 metatra. Andao hanao dia virtoaly mankany amin'ny Tempolin'i Kiyomizudera! Sarin'ny Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Shutterstock Tempolin'i Kiyomizudera any Kyoto = Shutterstock Tempolin'i Kiyomizudera any Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera any Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera any Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto any Kyoto = Shutterstock Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto = Shutterstock Sarintanin'ny Tempolin'i Kiyomizudera [adiresy sari-tany = "Tempolin'i Kiyomizudera" sakany = "100%" haavony = "353px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "dccreet-light"-class = "d12wlvYARFXNUMXobRvaOXNUMXPENXNUMX" border-map dp-map-centered" zoom="XNUMX" draggable="true" controls="true"] Misaotra anao mamaky hatramin'ny farany. Miverina amin'ny "Best of Kyoto"Lahatsoratra mifandraika: Sary: Tempolin'i Kodaiji any Kyoto Sary: Tempolin'i Nanzenji ao Kyoto: The Magic of Rurikoin Temple in Kyoto Photos: Autumn loko at Tofukuji Temple, Kyoto Photos: Daitokuji Temple in Kyoto -The World of Zen in Harmony with Nature Kyoto ! 26 Toetra tsara indrindra: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji sns Sary: Tempolin'i Eikando Zenrin-ji -Ny tempoly misy loko tsara tarehy indrindra amin'ny fararano Sary: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Sary: Kyoto nentim-paharazana amin'ny sary fahavaratra: voninkazo Cherry any Kyoto Sary: renirano Kamogawa ao Kyoto Sary: ravina fararano any Kyoto
Photos Toerana snow
Saripika: Tanàna rakotra oram-panala any Japon
Te-hizara aminareo ny endriky ny tanàna misy ranomandry any Japana aho. Sarin'i Shirakawa-go, Gokayama, Miyama ary Ouchi-juku ireo. Indray andro any, hankafy ny tontolo madio amin'ireo tanàna ireo ianao! Sarin'ny tanàna rakotra ranomandry Shirakawago (Préfektioran'i Gifu) Shirakawago, Prefektioran'i Gifu Shirakawago, Prefektioran'i Gifu Shirakawago, Prefektioran'i Gifu Sarintanin'i Shirakawago [adiresy sari-tany = "Shirakawago" sakany = "100%" haavony = "500px" api = "AIzaSyDvB87bpq8o" ="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Map an'i Gokayama [adiresy sari-tany = "Gokayama" sakany = "3%" haavony = "4px" api = "AIzaSyDvB8bpqAqs_d100wlvYARF500obRvaO87PEN8" theme = "malina" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8 " draggable="true" controls="true"] Miyama (Préfektioran'i Kyoto) Miyama, Prefektioran'i Kyoto Miyama, Prefektioran'i Kyoto Sarintanin'i Miyama [adiresy sari-tany="Miyama, Kyoto" width="3%" haavony="4px" api= "AIzaSyDvB8bpqAqs_d100wlvYARF500obRvaO87PEN8" theme="discret" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="marina" controls="marina"] Ouchi-juku (Fu Prefektioran'i kushima) Ouchi-juku, Prefektioran'i Fukushima Ouchi-juku, Prefektioran'i Fukushima Map of Ouchi-juku [adiresy sari-tany="Ouchijuku, Fukushima" width="3%" haavony="4px" api="AIzaSyDvB8bpqAqs_d100wlvYARF500obRvame" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="87" draggable="true" controls="true"] Inona no tokony hatao rehefa mitsidika ireo tanàna misy lanezy Mankasitraka anao mamaky hatramin'ny farany. Miverina amin'ny "Toerana lanezy" Lahatsoratra mifandraika: Sary: Tendrombohitra Fuji rakotra lanezy 8 Toerana tsara indrindra amin'ny ranomandry any Japon: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ... Sary: K-cars any Japan Sary: Sakura- Cherry blossoms in Sary Japoney: Ny Miharu Takizakura -Ny hazo serizy tsara indrindra any Japon! Sary: San'in -Tany mistery nitoeran'i Japana efa tranainy! Sary: Nara -Ilay renivohitr'i Japana taloha Tonga soa eto Japana! Ankafizo sary mahafinaritra 8! Sary: vanim-potoana efatra amin'ny Kamikochi Sary: Odaiba ao amin'ny helodranon'i Tokyo Sary: Hakodate Sary: Ise Jingu Shrine ...
Sary: Biei sy Furano amin'ny fahavaratra
Ny toerana fizahan-tany malaza indrindra any Hokkaido amin'ny fahavaratra dia Biei sy Furano. Ireo faritra ireo, any afovoan-tanànan'i Hokkaido, dia manana lemaka marokoroko. Voninkazo miloko mivelatra any. Hanasitrana ny sainao ny fahitana ny fiovan'ny zavaboary amin'ity lemaka ity. Raha ny momba an'i Biei sy Furano dia efa nanoratra lahatsoratra vitsivitsy aho. Na izany aza, tiako ny hampahafantatra bebe kokoa ny hakanton'ny ahitra amin'ny fahavaratra, ka hamintinako ny endri-tsary eto. Azafady, jereo ity lahatsoratra manaraka momba an'i Biei sy Furano ity. Tany tsara tarehy amin'ny fahavaratra Fiposahan'ny masoandro any Biei, Hokkaido, Japon = Adobestock Fambolena voninkazo tsara tarehy havoana miloko any Biei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia splendens mamony amin'ny tsipika avana ao amin'ny zaridainan'ny voninkazo Panoramic malaza sy tsara tarehy Shikisai-no-oka ao Hokkaido , Japon = Shutterstock Lavendar, felam-boninkazo mena amin'ny Sunrise Park, Furano, Hokkaido, Japon = Shutterstock Vehivavy mijoro eo amin'ny saha Lavender ao amin'ny Tomita Farm, Furano, Hokkaido, Japon = Shutterstock Fomba fijery mahafinaritra hafa any Biei sy Furano Havoanan'i Biei- cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary tree, toerana malaza any Biei-cho, Hokkaido Japon = Shutterstock mamelana ny tanamasoandro any Hokusei no Oka Tenbo Park ao Hokkaido, Japon = Shutterstock dobo manga an'ny tanàna bieishirogane = Shutterstock dobo manga ao an-tanànan'i bieishirogane = AdobeStock Evening in Hokkaido Evening landscape. Biei Hokkaido, Japon = Shutterstock filentehan'ny masoandro any Biei, Hokkaido, Japon = Shutterstock Masoandro mody tsara any Biei, Hokkaido, Japon = Shutterstock Maps Biei [adiresy sari-tany = "Biei, Hokkaido" sakany = "100%" haavony = "300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="marina" controls="marina"] Furano [adiresy sari-tany="Furano, Hokkaido" . ..
Sary: Geisha (Maiko & Geigi) any Gion, Kyoto
Mbola manana kolontsaina "geisha" i Japana. Geisha dia vehivavy mampiantrano ny vahiny amin'ny fo manontolo amin'ny dihy sy hira japoney. Hafa tanteraka amin'ny "Oiran" courtesan izay nisy tamin'ny andron'ny Edo ny Geisha. Any Kyoto, ny geisha dia antsoina hoe "geigi". Antsoina hoe "maiko" ny tanora geisha. Vao haingana, ny vehivavy niasa tao amin'ny orinasa dia mety ho lasa geisha. Efa imbetsaka aho no nanadinadina geisha taloha. Nianatra fomba tena ara-tsaina sy saro-pady izy ireo ary mpandimby sarobidy ny kolontsaina nentim-paharazana. Ao Kyoto, misy hetsika atao amin'ny lohataona sy ny fararano izay ahafahanao mijery dihy geisha. Geisha koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny Fetiben'i Gion amin'ny Jolay. Mba andramo ny kolontsaina geisha! Sarin'i Gion Sarin'i Gion = Shutterstock Sarin'i Gion = Shutterstock Sarin'i Gion = Shutterstock Sarin'i Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Photos of Gion = Shutterstock Sarin'ny Gion [adiresy sari-tany = "Gion, Kyoto" width = "100%" haavo = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "12 " draggable="true" controls="true"] Misaotra anao mamaky hatramin'ny farany. Miverina amin'ny "Best of Kyoto" Lahatsoratra mifandraika: Sary: Lapan'ny Imperial Kyoto (Kyoto Gosho) Sary: Kyoto nentim-paharazana tamin'ny fahavaratra Sary: Tempolin'i Kodaiji ao Kyoto Sary: Vonin'ny serizy any Kyoto Sary: Tempolin'i Kiyomizudera ao Kyoto Sary: Reniranon'i Kamogawa ao Kyoto Sary: Tempolin'i Nanzenji ao Kyoto Sary : The Jidai Matsuri Festival in Kyoto Photos: The fantastic illumination “Hanatouro” in Arashiyama, Kyoto Photos: ...
Saripika: Kinkakuji vs Ginkakuji -Aiza no tianao?
Iza no tianao kokoa, Kinkakuji sa Ginkakuji? Ato amin'ity pejy ity, mamelà ahy hampahafantatra ireo sary mahafinaritra an'ireo tempoly roa maneho an'i Kyoto ireo. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Kinkakuji sy Ginkakuji dia jereo ny lahatsoratra etsy ambany. Sarin'ny Tempolin'i Kinkakuji sy Ginkakuji Ginkakuji ao Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Kinkakuji any Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Ginkakuji ao Kyoto, Japon = Tempolin'i Ginkakuji Shutterstock ao Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Kinkakuji any Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Ginkakuji any Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Kinkakuji ao Kyoto, Japon = Tempolin'i Shutterstock Ginkakuji any Kyoto, Japon = Tempolin'i AdobeStock Kinkakuji any Kyoto, Japon = Sarintanin'i Kinkakuji Shutterstock [adiresy sari-tany = "Kinkakuji" sakany = "100%" haavony = "300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "12" draggable = "marina" controls = "marina"] Sarintanin'ny Ginkakuji [adiresy sari-tany = "Ginkakuji" sakany = "100%" haavo = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "12" draggable = "marina" controls = "marina" ] Mankasitraka anao mamaky hatramin'ny farany aho. Miverina amin'ny "Best of Kyoto"Lahatsoratra mifandraika: Sary: Tempolin'i Kodaiji ao Kyoto: ny làlana misy havoana manan-tantara ao Kyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, sns. Sary: Fetiben'ny Jidai Matsuri ao Kyoto: voninkazo Cherry ao Kyoto Sary: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Saripika: Kifune, Kurama, Ohara amin'ny ririnina -Mamihina ny manodidina ny avaratr'i Kyoto Kyoto! 26 Toetra tsara indrindra: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji sns. Sary: Nara -Ny renivohitr'i Japon taloha Sary: Geisha (Maiko & Geigi) ao Gion, Sary Kyoto: Kyoto nentim-paharazana amin'ny sary fahavaratra: tanàna feno rakotra lanezy ao Japana Sary: Koyasan
Rakotra lanezy ny Hakodate any amin'ny faritra atsimon'i Hokkaido nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Martsa. Tena tsara tarehy tokoa i Hakodate amin'izao fotoana izao. Ny vilia baolina hazan-dranomasina eny an-tsena antsoina hoe Asaichi ihany koa no tsara indrindra. Andao hanao dia virtoaly mankany Hakodate! Jereo ity lahatsoratra manaraka ity raha mila fanazavana fanampiny. Sarin'ny Hakodate Tazana alina avy ao amin'ny Tendrombohitra Hakodate = Shutterstock Toerana ririnina avy any an-tendrombohitra Hakodate = Shutterstock Tendrombohitra Hakodate hita avy any amin'ny Seranan-tsambon'i Hakodate = Shutterstock Ny tanànan'i Hakodate hita eo amin'ny tehezan'i Motomachi = Shutterstock Tanàna tram mandeha ao an-tanànan'i Hakodate = Shutterstock Tanànan'i Hakodate any ririnina Kanemori Aka Renga Soko ao Hakodate = Shutterstock Hokodate tsena maraina eo akaikin'ny gara Hakodate lovia hazan-dranomasina ao amin'ny tsena maraina Hakodate = Shutterstock Hazavaina tsara Goryokaku = Shutterstock Hazavaina tsara Goryokaku = Shutterstock Misy Tendrombohitra Komagatake tsara tarehy any amin'ny manodidina an'i Hakodate = Shutterstock Afaka mankafy skiing sy snowboarding ao amin'ny Onuma Park any ambanivohitr'i Hakodate = Shutterstock Map of Hakodate [adiresy sari-tany = "Hokodate" sakany = "100%" haavo = "500px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class = "dp-light" -border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Misaotra anao mamaky ny tapitra. Miverina amin'ny "Best of Hakodate" Lahatsoratra mifandraika: Hakodate! Sary 7 tsara indrindra ho an'ny mpizaha tany sy zavatra atao Sary: Biei sy Furano amin'ny fahavaratra Sary:Tetezan'i Taushubetsu any Hokkaido Sary: Tomamu any Hokkaido Sary: Soavaly any Hokkaido Sary: Ala tsara tarehy any Tokachi, Hokkaido Sary: Noboribetsu Onsen -Fialamboly mafana indrindra any Hokkaido Sary : Sary Yokohama: Sary Koyasan: Tanàna rakotra lanezy any Japana Sary: Okinawa's Beautiful ...
Saripika: Tsipika Tadami ao amin'ny Prefektur Fukushima
Raha te hankafy ny fomba fijery tsara tarehy any ambanivohitr'i Japana avy amin'ny lamasinina ianao, dia manoro hevitra ny JR Tadami Line any andrefan'ny Prefektioran'i Fukushima aho. Ny tsipika Tadami dia miainga avy ao Aizu-Wakamatsu, tanàna tranainy iray ahafahanao mahatsapa ny kolontsaina samurai ao Japana, mamakivaky ny tendrombohitra. Sarin'ny Tadami Line JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima = Pixta JR Tadami Line ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Pixta JR Tadami Line ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock Sarintanin'i Aizu-Wakamatsu [adiresy sari-tany = "Aizu-Wakamatsu" sakany = "100%" haavony = "300px " api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" draggable="marina" controls="marina"] Misaotra anao mamaky hatramin'ny farany . Miverina amin'ny "Best of Fukushima"Lahatsoratra mifandraika: Sary: Village Ouchijuku ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima: sary ao amin'ny Park Hanamiyama any amin'ny Prefektioran Fukushima Prefecture Fukushima! Toerana tsara sy zavatra tsara hatao sary: ​​The Miharu Takizakura -Ny hazo serizy tsara indrindra any Japon! Saripika: Shrine Ise Jingu ao amin'ny Prefektioran'i Mie: Sary Kanazawa ao amin'ny prefektioran Ishikawa: sary miorina ao amin'ny Shrine Motonosumi ao amin'ny Prefektioran'i Yamaguchi: Nosy Gunkanjima ao amin'ny Prefektioran'i Nagasaki: sary masina ao amin'ny Shrine Togakushi ao amin'ny Prefektioran'i Nagano: Lohasaha Biwako ao amin'ny Prefektioran'i Shiga: Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki: Ireo tanàna rakotra lanezy ao Japana
Saripika: Beppu (1) Mamirapiratra tsara tarehy mamirapiratra
Beppu, any amin'ny ilany atsinanan'i Kyushu, no toeram-pialan-tsasatra lehibe indrindra ao Japana. Rehefa mitsidika an'i Beppu ianao dia ho gaga voalohany amin'ireo loharano mafana mipoitra etsy sy eroa. Rehefa mijery ny tanàn-dehiben'i Beppu avy eny amin'ny havoana ianao, araka ny hitanao amin'ity pejy ity, dia miakatra eny rehetra eny ny etona. Tsy afo mihitsy izy ireny. Amin'ny alina, ireo etona ireo dia manazava sy mamiratra tsara. Sarin'i Beppu Map of Beppu [adiresy sari-tany = "Beppu, Oita" sakany = "100%" haavo = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "malina" class = "dp-jiro-tsisintany-saritany dp-sarintany- cented" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Misaotra anao mamaky hatramin'ny farany. Mba jereo ny sary hafa. Miverina amin'ny "Best of Beppu" Momba ahy Bon KUROSAWA Efa ela aho no niasa ho tonian-dahatsoratry ny Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ary miasa amin'ny maha-mpanoratra tranonkala mahaleo tena ahy ankehitriny. Tao amin'ny NIKKEI, izaho no lehiben'ny tonian'ny haino aman-jery momba ny kolontsaina Japoney. Mamelà ahy hanolotra zavatra mahafinaritra sy mahaliana maro momba an'i Japana. Jereo ity lahatsoratra ity raha mila fanazavana fanampiny. Lahatsoratra mifandraika: Sary: Beppu (4) Ankafizo ny loharano mafana amin'ny endrika isan-karazany! Beppu! Ankafizo ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra lehibe indrindra ao Japana! Sary: Beppu (3) Andao hitsidika Hells isan-karazany (Jigoku） Sary: Beppu (2) Ny fiovana mahafinaritra amin'ny vanim-potoana efatra! : Hakone -Faritra loharano mafana naroso akaikin'i Tokyo Sary: Ririnina ao amin'ny Niseko Ski Resort any Hokkaido -Ankafizo ny ranomandry!
Saripika: The Miharu Takizakura -Ny hazo cherry tsara indrindra any Japon!
Raha hanontany ahy ianao hoe inona no vonin'ny serizy tsara tarehy indrindra any Japana, dia lazaiko hoe Miharu Takizakura ao amin'ny prefektioran'i Fukushima. Ny hazo Miharu Takizakura dia mihoatra ny 1000 taona. Io hazo serizy tsara tarehy io dia narovana sy tian'ny mponina hatry ny ela. Andao hanao dia virtoaly hankasitraka ny Miharu Takizakura! Photos of the Miharu Takizakura The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock Prefektiora = Shutterstock Ny Miharu Takizakura ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock Ny Miharu Takizakura ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock Ny Miharu Takizakura ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock Ny Miharu Takizakura ao amin'ny prefektioran'i Fukushima = Shutterstock Map of Miharu Takizakura [adiresy sari-tany = "Ny Miharu Takizakura any Fukushima " width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discret" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls= "marina"] Mankasitraka anao mamaky hatramin'ny farany aho. Miverina amin'ny "Best of Fukushima" Lahatsoratra mifandraika: Sary: Hanamiyama Park ao amin'ny prefektioran'i Fukushima Sary: 11 teny fototra hankafizana tanteraka ny voninkazo serizy japoney Sary: Tanàna rakotra lanezy any Japana Sary: Tendrombohitra Yoshino -30,000 hazo serizy mamelana amin'ny lohataona! Sary: Koyasan Photos: Ise Jingu Shrine ao amin'ny prefektioran'i Mie Sary: Kanazawa ao amin'ny prefektioran'i Ishikawa Sary: San'in -Tany mistery izay nijanonan'i Japana tranainy!
Saripika: Takachiho ao amin'ny prefektioran'i Miyagaki
Takachiho dia tany mistery fantatra amin'ny anarana hoe fonenan'ny angano japoney. Ao amin'ny faritra be tendrombohitra ao amin'ny prefektioran'i Miyazaki any atsinanan'i Kyushu no misy azy. Mbola mitazona ny toerana angano sy ny dihy Kagura mifandray amin'izy ireo ny tanàna. Malaza ihany koa ny ranomasina rahona tsara tarehy amin'ny fararano. Ary ny toerana fizahan-tany malaza indrindra amin'ity tanàna ity dia ny Takachiho Gorge. Andao hanao dia virtoaly mankany Takachiho miaraka amin'ny sary maro! Sarin'i Takachiho Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki = Shutterstock Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki = ADobeStock Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki = Shutterstock Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki = Shutterstock Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki = Shutterstock Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki Takachiho ao amin'ny Prefektioran'i Miyagaki ao amin'ny prefektioran'i Miyagaki Sarintanin'i Takachiho [adiresy sari-tany = "Takachiho, prefektioran'i Miyazaki" sakany = "100%" haavony = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "malina" class="dp-jiro-tsisintany-saritany dp -centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Misaotra anao mamaky hatramin'ny farany. Miverina amin'ny "Best of Miyazaki" Lahatsoratra mifandraika: Sary: Oze ao amin'ny Prefektioran'i Gunma Sary: Lohasahan'i Biwako ao amin'ny Prefektioran'i Shiga Sary: Kanazawa ao amin'ny prefektioran'i Ishikawa Sary: Hanamiyama Park ao amin'ny prefektioran'i Fukushima Sary: Ise Jingu Shrine ao amin'ny Prefektioran'i Mie Sary: Nosy Gunkanjima ao Nagasaki Sary ao amin'ny prefektioran'i Togakushi ao amin'ny prefektioran'i Nagano Sary: Trano masina Motonosumi ao amin'ny prefektioran'i Yamaguchi Sary: Tadami Line ao amin'ny prefektioran'i Fukushima Sary: Castle Shuri ao amin'ny prefektioran'i Okinawa Sary: Matsue ao amin'ny prefektioran'i Shimane Sary: Castle Hikone ao amin'ny prefektioran'i Shiga
Mandehana any amin'ny sary
Hafatra avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra:
Misaotra anao nitsidika "Best of Japan"! Bon Kurosawa no anarako ary ny tanjoko dia ny hanome vaovao mahasoa ny mpitsidika sy izay mila an'i Japana. Ireo lahatsoratra, sary sy horonan-tsary ireo dia hanome anao tsirony hafakely any Japon. Manantena aho fa amin'ny alàlan'ny «Best of Japan”Hahatsapa ho akaiky an'i Japana ianao ary hanana eritreritra tsara kokoa amin'izay antenainao.
Ankafizo i Japon eto amin'ity tranonkala ity!
Ity tranokala ity dia tsara indrindra avy amin'ny solosaina. Ny horonantsary sasany dia mety tsy nilalao tamin'ny findainao. Na izany aza, avy amin'ny telefaona finday dia mbola afaka miditra amin'ny lahatsoratra manome anao ny fampahalalana farany momba an'i Japana. Ireo rohy ivelany avy amin'ity tranokala ity dia azo ampiasaina koa ho tombontsoanao.
Betsaka ny tranokala izay mampahafantatra an'i Japana. Na dia vao nanomboka io tranonkala io dia hanohy hanavao hatrany ny atiny.
Rehefa te hianatra momba an'i Japon ianao na mila zavatra mahaliana mamakyBest of Japan”No safidy tsara indrindra anao!
Lasan'ity tranonkala ity
Iza no pejy tianao handiazana an'i Japon?
Ny fiainana sy ny kolontsaina japoney! miaina mifanaraka amin'ny natiora sy ny olona
Manomboka eto dia tiako ny mampahafantatra anao ny fiainana sy ny kolontsaina Japoney. Heveriko fa ny teny lakile hahafantarana ny fiainana sy ny kolontsaina japoney dia ny "Harmony". Noho izany dia tiako ny hamintina ny fiainana sy ny kolontsaina Japoney amin'ity fomba fijery "firindrana" eto amin'ity tranonkala ity. "Harmony" izay mifototra amin'ny fiainana sy kolontsaina Japoney Inona no sarinao momba an'i Japon? Avy amin'ny olona sasany dia toa firenena sarotra azo loatra i Japon. Japon dia mety ho "Galapagos" amin'ny lafiny iray. Any amin'ny firenena nosy iray lavitra ny kaontinanta, dia kolokoloina ny fiainana sy ny kolontsaina miavaka. Taorian'ny nahatongavany tany Japon, maro ny olona gaga amin'ny fiainana sy ny kolontsaina nivelatra toy ny Galapagos. Raha mandroso ireo tanàna goavambe toa an'i Tokyo sy Osaka, ny toetra manankarena amin'ireo vanim-potoana efatra dia mandray ireo mpitsidika. Ny lovantsofina toy ny fitoerana masina, sumo ary kabuki dia mbola mitoetra ihany, fa ny kolontsaina vaovao toy ny sarimiaina, cosplay, robot, sns. Firenena izay misy zavatra mifanohitra rehetra dia symbiotic. Japon izany. Raha tsindrio ny sary etsy ambany, dia hoentina amin'izao tontolo izao ny firindrana miafina Japoney. Nanomana pejy isan-karazany aho, koa mba tsidiho ny pejy maro ary mifalia. Harmony miaraka amin'ny natiora Harmony miaraka amin'ny fomban-drazan'ny olona Modernity horonantsary natolotra hampahafantatra ny fiainana sy ny kolontsaina Japoney tiako ianao mamaky hatramin'ny farany. Miverina any an-trano Momba ahy Bon KUROSAWA Efa ela aho no niasa ho tonian-dahatsoratr'i Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ary miasa amin'ny maha mpanoratra Internet tsy miankina ahy. Tao amin'ny NIKKEI dia ...
20 Zavatra tsara indrindra tokony hatao any Japon sy ny fomba hanaovana famandrihana
Betsaka ny zavatra azonao ankafizina amin'ny dianao mankany Japon. Anisan'izany, karazana zavatra inona no kasainao hananganana ny drafi-pizahanao? Eto amin'ity pejy ity dia nitanisa izay azonao atao any Japon aho. Azafady tsindrio ny sarin'ilay zavatra mahaliana anao ary mahazoa fampahalalana misimisy kokoa. Fampahalalana fototra momba ny famandrihana tapakila sy fitsangatsanganana mpizahatany tsy fanta-daza manao kimono, fitafiana nentim-paharazan'i Japon mandeha eo amin'ny tempolin'i Sensoji ilay tempoly malaza any Tokyo, Japan = shutterstock Alohan'ny hanazavana izay tokony ho tianao any Japon, azafady mba fantaro ny fampahalalana fototra iray tokony hatao mahafinaritra ny dia. Izany dia momba ny fomba famandrihana tapakila sy fitsangatsanganana isan-karazany. Ampidiriko ao amin'ny lahatsoratra manaraka ity hevitra ity, ka azafady, midina raha liana ianao. Zavatra 20 tsara indrindra azonao ankafizina amin'ny dianao mankany Japon Ary avy eo, eto ambany, dia tanisiko ireo zavatra 20 hatolotro anao. Raha tsindrio ny sary tsirairay dia azonao atao ny mifindra amin'ilay lahatsoratra mifandraika amin'izany. Sakafo Japoney Fiantsenana Toeram-panala sy voninkazo Cherry voninkazo voninkazo roa zazavavy Japoney mipetraka eo amin'ny gorodona karipetra mena hijery sy hankafy ny ravina miloko ravina miloko ravina ao amin'ny tempolin'i Enkoji, Kyoto, Japan. Ity misy sekta Rinzai Zen ary malaza be mandritra ny vanim-potoanan'ny fararano = ravina fararano ravina zaridaina Onsen (Lohataona mafana) Mpihetsiketsika amin'ny biby sy trondro Hiking Cosplayer amin'ny maha-olona azy amin'ny fetibe cosplay ao Japon .Mifandray matetika ny mpanafika mba hamorona zana-kolontsaina ary fampiasana bebe kokoa an'ilay teny hoe " cosplay ", Osaka, Japana = Fialamboly valan-javaboary ary Fety eo amin'ny zaridaina lohahevitra ...
Toeram-pizahan-tany tsara indrindra any Japon! ririnina, lohataona, fahavaratra, fararano
Ao amin'ity tranonkala ity, manana pejy hampahafantarako tsirairay amin'ny faritra maro ao Japon aho. Azonao atao ny mankamin'ny pejy amin'ny fijerena ny menio sy ny fipihana ireo lohateny tianao. Na izany aza, nataoko lisitra eto ambany ireo pejy ireo. Jereo ity manaraka ity ary raha misy pejy iray mahaliana anao dia tsindrio azafady ary mandehana mankany amin'io pejy io. Satria i Japana dia firenena midadasika be any avaratra sy atsimo, i Hokkaido any avaratra ary i Kyushu sy i Okinawa any atsimo dia samy hafa tanteraka. Manantena aho fa ho hitanao ao amin'ny tranokalako i Japon tianao indrindra. Fitsangatsanganana an-tany 10 tsara indrindra: Aiza no tianao aleha? Raha te hijery topy izay toerana fitsangatsanganana any Japon ianao dia vakio ity pejy manaraka ity. Toerana tsara indrindra rehefa mandeha any Japon Ny toerana malaza indrindra any Japon dia ireto manaraka ireto. Jereo ireo sary mihetsika ary kitiho ny toerana tianao rehetra. Ireto manaraka ireto dia lahatsoratra mifandraika amin'ny faritra. Hokkaido Toerana notsongaina Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku faritra (faritra avaratra atsinanan'i Honshu) Toerana notokanana Sendai (Prefektioran'i Miyagi) Towada, Oirase (Prefektur Aomori) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Kanto Region (Manodidina an'i Tokyo） Toerana itodiana Tokyo Hakone (Prefektur Kanagawa) Kamakura (Prefektioran'i Kanagawa) Faritra Chubu (Honshu afovoany) Toerana notoroana an'i Mt Fuji (Yamanashi, Prefektur Shizuoka) Shirakawago (Prefektur Gifu) Kanazawa (Prefekti Ishikawa) Faritra Kansai (Manodidina an'i Kyoto sy Osaka) Toerana notoroana hevitra Kyoto (Prefektur Kyoto) Nara (Nara Prefecture ) Osaka (Prefektur Osaka) Faritra Chugoku (Honshu Andrefana) Toerana notoroana hevitra Hiroshima (Prefektioran'i Hiroshima) Miyajima (Prefektioran'i Hiroshima) Matsue (Shimane ...
Ahoana ny famakiana trano fonenana ao Japon!
Misy olona manana fialamboly hafahafa hafahafa. Tena tiako ny mampitaha ireo toerana famandrihana hotely. Rehefa namaky trano fandraisam-bahiny aho dia nandinika izany tamina toerana be dia be ary namaky izany amin'ilay tranonkala izay tena resahako indrindra. Ho ahy miaraka amina fialamboly tahaka izany, tsapako fa misy mpizahatany mampiasa tranonkala famandrihana izay tsy azoko zahana betsaka. Noho izany, hampahafantariko ny momba ny toerana famandrihana hotely fangatahana ho an'ny rehetra amin'ny alàlan'ny fanaovana tranokala tsy mitovy amin'ny "Best of Japan"manomboka izao. Ao amin'ity pejy ity dia hampahafantariko ny sasany amin'ireo toerana famandrihana hotely hotoviko. Raha mila fanazavana momba ny trano fonenana ao Japana toa ny hotely Ryokan, Minshuku, azafady jereo ity lahatsoratra manaraka ity. Tsindrio ny sary tsirairay, ny toerana famandrihana naseho amin'ny pejy iray manokana 2 Toetran'ny fampitahana tsara indrindra amin'ny famandrihana famandrihana any Japana Misy tranonkala marobe fa afaka mametraka hotely na Ryokan any Japana ianao, ary saika tsy azo atao ny mahita azy rehetra. dia 'toerana fampitahana' izay ahafahanao mampitaha ny drafitry ny trano fandraisam-bahiny amin'ny toerana famandrihan'ny hotely .Tanana ny TripAdvisor TripAdvisor Raha te hahita trano sahaza anao ianao any amin'ny tanàna sasany toa an'i Tokyo na Kyoto, dia manoro hevitra aho aloha fa hitanao ao amin'ny TripAdvisor. tranonkala fampitahana iray fanta-daza indrindra ity tranonkala ity dia manana tombony roa.Indro, amin'ny alàlan'ny fampiasana TripAdvisor, afaka manangona vaovao momba ireo hotely misy saranga indrindra sns ianao amin'ny tanàna halehanao. Faharoa, azonao atao ny mahita accomm mora indrindra. drafitra fofonaina ...
Fitaterana any Japon! Japan Rail Pass, Shinkansen, seranam-piaramanidina sns.
Rehefa mandeha any Japon ianao dia afaka mihetsika tena mahomby amin'ny fampifangaroana ny shinkansen (lamasinina Bullet), fiaramanidina, bus, taxi, fanofana fiara sns. Raha manampy ny dianao Shinkansen amin'ny làlan-kaleha ianao dia ho fahatsiarovana mahafinaritra izany. Amin'izay, ny fividianana ny "Japan Rail Pass" dia tena mitombina. Amin'ity pejy ity dia hampahafantatra topimaso momba azy ireo aho. Somary lava ity pejy ity. Raha tsindrio ny bokotra "asehoy" isaky ny singa dia haseho ny atiny miafina amin'ny antsipiriany. azafady mba araraoty ny tabilao atiny. Azonao atao ny miverina eo an-tampony amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra zana-tsipìka eo ankavanan'ny farany amin'ity pejy ity. Japan Rail Pass Tranonkala ofisialin'ny "Japan Rail Pass". Tsindrio ilay izy dia haseho amin'ny pejy hafa Manindry ny sary dia haneho ity sarintany ity ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Japan Rail Pass amin'ny pejy iray misaraka momba ny Raha mikasa ny hitety faritra ao Japon ianao mampiasa lamasinina JR toa an'i Shinkansen, dia mety te hividy ianao "Japan Rail Pass" alohan'ny hiaingany. Japan Rail Pass (antsoina koa hoe JR Pass) dia làlan-dalamby mahomby izay atolotry ny JR ho an'ireo mpizahatany vahiny. Azonao atao ny mitaingina be amin'ny Shinkansen an'i JR sy ny entana mahazatra sns. Ny vidin'ny Japan Rail Pass, ohatra, 33,000 7 yen isan'olona (28,000 andro, karazana fiara mahazatra). Any Japon, mila eo amin'ny XNUMX yen ny olona iray mandroso sy miverina eo anelanelan'ny Tokyo sy Osaka ao Shinkansen. Raha mampiasa JR be dia be ianao dia ho lasa "sakaizanao" mahery indrindra i Japan Rail Pass. Ity ambany ity ny ...
Lahatsoratra / fanomanana ilaina
Mamelà ahy hampahafantatra momba ny lahatsoratra sasany amin'ity tranonkala ity ianao.
Misy olona manana fialamboly hafahafa hafahafa. Tena tiako ny mampitaha ireo toerana famandrihana hotely. Rehefa namaky trano fandraisam-bahiny aho dia nandinika izany tamina toerana be dia be ary namaky izany amin'ilay tranonkala izay tena resahako indrindra. Ho ahy miaraka amin'ny fialamboly toy izany, tsapako fa misy mpizahatany ...
Ahoana ny fomba hamakiana sy hividianana tapakila sy fitsangatsanganana any Japon! Sumo, Baseball, Concert, hetsika ...
Raha tsy mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana miaraka amina vondrona lehibe ianao ary mandehandeha malalaka miaraka amin'ny namana na fianakaviana any Japon, ahoana ny fomba famakiana sy hividianana tapakila ho an'ireo fifaninanana fanatanjahantena sy fifaninanana. Sa ahoana ny fampiharana ny fitsangatsanganana toy ny hetsika? Misy toerana famandrihana ...
Rehefa mandeha any Japana ianao dia afaka mihetsika tsara amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny shinkansen (Bullet train), fiaramanidina, fiaramanidina, fiaran-dalamby, aotom-piaramanidina sns .. Raha mampiditra mitaingina Shinkansen amin'ny datinao ianao dia ho fahatsiarovana mahafinaritra izany. Amin'izay dia mety handanjalanja be ny fividianana "Japan Rail Pass". Eto amin'ity pejy ity dia ...
Lahatsoratra / toerana voalaza
Eto amin'ity tranokala ity, misy pejy hampahafantarako tsirairay ny faritra maro ao Japon. Azonao atao ny mandeha any amin'ny pejy amin'ny alàlan'ny fijerena ny menio ary tsindrio ireo lohateny mahaliana anao. Na izany aza dia notanisiko eto ambany ireto pejy ireto. Jereo ireto manaraka ireto ary raha misy takelaka ao amin'ny ...
Ny zavatra tsara indrindra any Tokyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney sns.
Tokyo no renivohitra ao Japana. Raha mbola mijanona ny kolontsaina nentin-drazana, dia misy hatrany ny fanavaozana ankehitriny. Tongava ianao hitsidika an'i Tokyo ary mahatsapa ny angovo. Eto amin'ity pejy ity, hampahafantatra ireo faritra fizahan-tany sy toerana fitsangatsanganana malaza indrindra eto Tokyo aho. Tena lava ity pejy ity Raha mamaky ity pejy ity ianao, ...
Kyoto! 26 Fanintinana tsara indrindra: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji sns.
Kyoto dia tanàna mahafinaritra izay mandova ny kolontsaina japoney nentim-paharazana. Raha mankany Kyoto ianao dia afaka mankafy kolontsaina nentim-paharazana japoney amin'ny votoatin'ny fonao. Eto amin'ity pejy ity, hampahafantariko ireo atintin'ny fizahan-tany izay atao indrindra ao Kyoto. Lava io pejy io fa raha mamaky ity pejy ity mankany ...
Lahatsoratra / Fankafantarana fangatahana
Maro ny zavatra azonao atao mandritra ny dia mankany Japon. Anisan'ireny, inona ny zavatra tianao hatao hananganana ny drafitry ny dia? Ao amin'ity pejy ity, nataoko izay hahafinaritra anao any Japon. Azafady tsindrio ny sarin'ilay entana izay tianao sy ...
Toerana snow tsara indrindra any Japon: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, festival sapporo ...
Eto amin'ity pejy ity, te-hampahafantatra momba ny toe-javatra mahafinaritra ranomandry any Japon aho. Misy faritra be ranomandry any Japon, noho izany dia sarotra ny manapa-kevitra ny toerana tsara indrindra amin'ny Ranomandry. Ao amin'ity pejy ity, namintina ireo faritra tena tsara indrindra aho, indrindra amin'ireo toerana malaza amin'ny mpizahatany vahiny. Nozaraiko izany ...
Best Choss Blossom Spots sy Vanim-potoana ao Japon! Hirosaki Castle, Mt.Yoshino ...
Amin'ity pejy ity dia hampahafantariko toerana fitsangatsanganana miaraka amin'ny voninkazo serizy mahafinaritra. Satria mamboly voninkazo serizy etsy sy eroa ny vahoaka Japoney, sarotra be ny manapa-kevitra ny faritra tsara indrindra. Amin'ity pejy ity dia hampahafantariko anao ireo faritra izay ahafahan'ny mpitsangatsangana avy any amin'ny firenena vahiny mankafy ny fihetsem-po japoney misy voninkazo serizy. ...
Fampahalalana fototra 11 tokony ho fantatra alohan'ny fitsangatsanganana any Japon
Ny zavamananaina japoney izay miseho amin'ity fampisehoana Slide ity dia azo antoka fa hitondra vaovao mahasoa aminao!
Rahoviana no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Japon?
Rahoviana no fotoana tsara indrindra handehanana any Japon? Ny valiny dia miankina amin'ny tanjonao amin'ny dia. Angamba maniry hahita ny felan'ny serizy malaza any Japon ianao? Raha izany no izy dia manoro hevitra aho ny ho tonga any Japon mandritra ny volana aprily. Angamba te-hahita sary masiaka feno lanezy ianao? Andramo mitsidika an'i Hokkaido, Tohoku na Nagano ny volana Janoary ka hatramin'ny Febroary. Raha te hankafy ravina fararano ianao dia ny volana novambra no tsara indrindra. Raha hahita ravina fararano any Hokkaido ianao dia manodidina ny volana Oktobra no tsara indrindra. Ity lahatsoratra ity dia manasongadina ny fizaran-taona mahafinaritra indrindra. Lohataona - Martsa, Aprily, Mey: vanim-potoana voninkazo tsara tarehy Mt. Fuji, Japan = Adobe Stock Nemophila ao amin'ny Hitachi Seaside Park, Ibaraki, Japan Ny lohataona any Japon dia mandritra ny volana martsa, aprily ary mey. Ny herinandro 3 farany volana martsa ary koa ny herinandro 3 voalohany amin'ny volana aprily dia fotoana mety amin'ny fitsangatsanganana amin'ny Lohataona. Mamarana ny taom-pianarana ny mpianatra ary mbola eo am-perinasa ny olon-dehibe miasa. Ny taom-pianarana japoney dia manomboka amin'ny volana aprily ary mifarana amin'ny volana martsa ny taona manaraka. Ny felam-boninkazo dia mamelana matetika mandritra ny roa herinandro eo anelanelan'ny taom-pianarana. Miankina amin'ny alehanao any Japon, dia ho afaka hahita festival voninkazo serizy foana ianao. Ny toetr'andro amin'ny lohataona dia tsara indrindra amin'ny antoandro, fa ny alina dia somary mangatsiaka ihany fahavaratra - Jona, Jolay, Aogositra: Torohevitra Hokkaido sy fahavaratra dia tanimbary voninkazo miloko sy lanitra manga any Shikisai-no-oka, Biei, Hokkaido, .. .
Fiteny! 3 zavatra tokony hotadidina rehefa miresaka amin'ny japoney
Betsaka ny Japoney tsy mahay mampiasa anglisy. Noho io antony io dia tsy afaka mifandray tsara amin'ny vahoaka Japoney ny olona tonga any Japon. Manontany tena ny vahiny indraindray hoe ahoana no hangatahana fanampiana amin'ny olona rehetra rehefa very izy na mila fampahalalana. Rehefa mankany amin'ny tanàna kely na vohitra kely izy ireo dia tsy afaka mifandray mora amin'ny olona any amin'ny trano fisakafoanana na hotely akory. Any Japon, inona no azonao atao mba hifandraisana amin'ireo olona any Japon? Manoro hevitra ireto zavatra telo manaraka ireto aho. Andao hiteny hoe "Sumimasen" Rehefa miresaka amin'ny Japoney tsy fantatrao ianao dia tokony hampiasa ity andianteny Japoney manaraka ity aloha. "Sumimasen" Ity misy dikany mitovy amin'ny "Azafady" na "Miala tsiny (hanelingelina anao)" amin'ny teny anglisy. Amin'ny teny Japoney, io andianteny io dia ampiasaina matetika. Ny "Sumimasen" dia azo ampiasaina ho "misaotra" na koa miantso vonjy amin'ny fivarotana na trano fisakafoanana. Tena mahasoa ity andianteny ity raha te hisarika ny sain'ny olona iray ianao. Amin'ny ankapobeny, ny olona avy any Japon dia tsy mahay miteny anglisy. Na izany aza, raha miteny hoe "Sumimasen" amin'ny Japoney ianao dia hijanona izy ireo ary hihaino izay holazainao. Tsara fanahy sy mandray olona vahiny ny vahoaka Japoney noho izany azafady, aza misalasala mampiasa ny "Sumimasen" raha mila fanampiana ianao. Aza adino ny misaotra olona nihaino azy koa. Aza manahy. Ny Japoney dia mahatakatra ny fomba ilazana hoe "Misaotra" amin'ny teny anglisy mba hahafantaran'izy ireo ny fankasitrahanao. Manorata taratasy amin'ny taratasy Mahamenatra ny Japoney, fa rehefa sahirana ianao, dia hanampy anao izahay. = Shutterstock ...
Vola Japoney Ahoana ny fifanakalozana fifanakalozana ary ny fomba handoavana izany
Ny vola any Japon dia Yen. Ity pejy ity dia manana ny taha farany amin'ny fifanakalozam-bola ka miangavy anao mba jereo eto alohan'ny hifanakalo vola. Ho hitanao eto ihany koa ny fampahalalana momba ny faktiora sy vola madinika Japoney. Ho fanampin'izay, hanazava ny zava-misy ankehitriny momba ny fampiasana carte de crédit any Japon aho. Lisitry ny tahan'ny fifanakalozana: ny fandaharam-pianarana / USD any Japon, sns. Ohatrinona ny 1 yen amin'ny volan'ny firenenao? Loharano: www.exchange-rates.org Volapoky banky japoney sy vola madinika Points Banknotes any Japan = Adobe Stock Misy karazana banknotes efatra any Japon. Ny naoty mety hampiasanao indrindra dia mitazona ny sandan'ny 1000 yen. 10,000 yen 5,000 yen 2,000 yen 1,000 yen Vola any Japon = Adobe Stock Misy karazany efatra ny vola madinika any Japon. Manantena ny hampiasa matetika ny vola 100 yen sy 10 yen. 500 yen 100 yen 50 yen 10 yen 5 yen 1 yen Lahatsary narotsaka mifandraika amin'ny vola Japan's Payment in Japan Points Mbola betsaka ny fivarotana izay tsy mandray vola afa-tsy ao Japon, misy fivarotana maro izay tsy mandray afa-tsy vola. Ho an'ny ankamaroan'ny hotely, fivarotana lehibe, fivarotana lehibe, fivarotana mora ampiasaina dia azonao atao ny mampiasa carte de crédit raha mandeha ao an-tanàna ianao. Na ny taxi sasany aza dia tonga nanaiky carte de crédit tato ho ato. Masinina mpivarotra maro izay mividy tapakilan'ny lamasinina no afaka mampiasa carte de crédit. Na izany aza, raha mandoa saram-pidirana ao amin'ny tempoly na toerana masina ianao dia tokony hanana vola mora foana. Ampifamadiho ny volanao any amin'ny seranam-piaramanidina Any Japon, fivarotana vitsy dia vitsy no mandray vola hafa noho ny yen Japoney. Noho izany, ...
Tranonkala mahasoa eo am-panomanana ny dianao mankany Japon
Amin'ity pejy ity dia hampahafantatra tranokala maro samihafa mifandraika amin'i Japon aho. Havaoziko tsindraindray ity fampahalalana ity. Mety ho loharanom-pahalalana manampy anao hampiasainao hanangonana vaovao. Ny hotely, fitaterana, trano fisakafoanana ary tranokala mifandraika amin'izany dia fintinina amin'ny antsipiriany isan-tsokajy. Koa satria misy rohy eo amin'ny faran'ity pejy ity dia mankanesa any amin'ilay pejy tianao ho hitanao eo. Ireo tranonkala izay mampianatra betsaka momba ny Japan Japan National Tourism Organisation Japan National Tourism Organization (JNTO) dia varavarankely mifandraika amin'ny fizahan-tany an'ny governemanta Japoney. Ny tranonkala ofisialin'ny JNTO dia misy fampahalalana fitsangatsanganana maro ho an'i Japon. Ity fampahalalana ity dia amin'ny fiteny 15. Raha misy loza lehibe any Japon, ity tranonkala ofisialy ity dia hanome fampahalalana ilaina ho an'ireo mpizahatany vahiny. >> Eto ny tranokala ofisialin'ny JNTO japan-guide.com japan-guide.com dia tranonkala malaza iray izay soloin'ireo vahiny monina ao Japon. Nampitomboiny tsikelikely ny isan'ny lahatsoratra hatramin'ny namoronana ny tranonkala. Azo lazaina fa io no fampahalalana momba ny fizahan-tany mahazatra indrindra amin'ireo mpizahatany tonga eto Japon ankehitriny. Amin'ny lohataona, manome fampahalalana momba ny fivelaran'ny voninkazo serizy any Japon izy io. >> Ny tranonkala ofisialin'ny japan-guide.com dia eto ZEKKEI Japan ZEKKEI Japan dia tranokala fampahalalana momba ny fizahan-tany izay soloin'ny orinasa iray manana foibe any Ginza, Tokyo. Manome lahatsoratra mampiasa sary mahafinaritra hampahafantarana ny hatsaran-tarehy Japoney amin'ny olona any ampitan-dranomasina izy io. "ZEKKEI" dia midika hoe "ny tontolo tsara tarehy avo indrindra" amin'ny teny Japoney. Toy ny dikan'ny anarany, izy io dia ...
SIM Card vs. Fanofa Wi-Fi Pocket ao Japana! Aiza no hividy sy manofa?
Mandritra ny fijanonanao any Japon dia mety te hampiasa telefaona finday ianao. Ahoana ny fomba hahazoanaanao? Misy safidy enina mety. Voalohany, azonao atao ny mampiasa serivisy roaming amin'ny drafitra misy anao ankehitriny fa azafady mba jereo amin'ny serivisy mpanome tolotra aminao. Faharoa, azonao atao ny mampiasa Wi-Fi maimaim-poana miaraka amin'ny findainao ankehitriny rehefa mandeha any Japon. Manaraka afaka misoratra anarana amin'ny serivisy Wi-Fi mandray karama ianao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa karatra SIM efa nomanina izay mahavita manolotra serivisy any Japon miaraka amin'ny findainao tsy voafehy. Afaka mampiasa serivisy hofan-trano any amin'ny firenenao na any Japon ianao ianao haka kitapo Wi-Fi router, karatra SIM, na finday mahay. Farany, mety ho manofa telefaona findainao ianao avy amin'ny hotely anao. Ity ambany ity ny fampahalalana momba ny tsirairay amin'ireo safidy ireo hanampiana anao hanapa-kevitra. Inona no safidy tsara indrindra amin'ny fampiasana anao? Toy izao manaraka izao ny mombamomba ny mpivarotra karatra sim any amin'ny seranam-piaramanidina Kansai ao Osaka Japan. Serivisy fanamafisana lafo vidy, vao haingana, ny serivisy miohatra izay azo ampiasaina mora vidy any amin'ireo firenena any ivelany. Raha toa ka misy serivisy miaro tena amin'ny alàlan'ny mpanome anao ankehitriny dia eritrereto ny fampiasana azy. P Route Wi-Fi poketra Raha mandeha miaraka amin'ny fianakavianao na ny namanao ianao, dia tsara kokoa raha mampiasa sakana Wi-Fi ianao no mandeha. Miaraka amin'ny router Wi-Fi iray dia afaka mampiasa Internet ny tarika misy anao amin'ny finday mihoatra ny iray. Raha manana roa na mihoatra Wi-Fi router ianao dia mora aminao ny mifampiresaka tsara rehefa misara-bazana ianao ...
Izao i Japana izao! Ny fahasamihafana ny fotoana amin'ny taninao
Tsy misy afa-tsy faritra iray any Japon. Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Sendai, Nagano, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto ary Okinawa dia miaraka amin'ny fotoana iray. Ankoatr'izay, satria tsy misy ora fitsitsiana andro any Japon, dia tsy dia sarotra aminao ny mahafantatra ny ora any Japon. I Japon izao no fotoana ambany kokoa (Raha tsy aseho ny fotoana dia apetraho amin'ny faritra Japoney amin'ny sarintany ny kursor). Azafady mba jereo ny fotoana voalaza etsy ambony ary zahao ny elanelam-potoana amin'ny faritra onenanao. Raha lava any atsinanana sy andrefana ny firenena, dia misy faritra maromaro ao amin'io firenena io ihany, misy ny fotoana tsy itovizany. Na izany aza, tsy dia lavitra loatra any atsinanana sy andrefana i Japon. Any Japon, ny tany dia miitatra lava any avaratra sy atsimo, fa amin'ny atsinanana sy andrefana dia tsy dia ela loatra ka ilaina ny mampitombo ny faritry ny fotoana ho roa na mihoatra. Ny bitro eto amin'ity pejy ity dia mipetraka ao amin'ny nosy Ookuno ao amin'ny tanànan'i Takehara, prefektioran'i Hiroshima. Tsy misy afa-tsy olona 20 eto amin'ity nosy ity, fa bitro 700 kosa no ao. Ao amin'ny tantara "Alice's Adventures in Wonderland", mihazakazaka maika ny bitro iray raha mijery ny famantaranandro. Raha mankany amin'ny nosy Oono ianao, dia mety hahita jamba bitika miafina toy izany. Ankasitrahako ny famakianao hatramin'ny farany. Miverina amin'ny "Fundamentals" Momba ahy Bon KUROSAWA Efa ela aho no miasa amin'ny maha-tonian-dahatsoratr'i Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ahy ary mpanoratra an-tranonkala tsy miankina izao. Ao amin'ny NIKKEI, ...
Fety any Japon! Be mpitia ireo mpizaha tany mandritra ny Herinandron'ny Lohataona
Misy 16 fialan-tsasatra ara-dalàna any Japon. Raha milatsaka amin'ny alahady ny fialantsasatra dia andro fialantsasatra ny andro faran'ny herinandro akaiky indrindra (matetika ny alatsinainy). Ny fialantsasatra japoney dia mifantoka indrindra amin'ny herinandro hatramin'ny faran'ny volana aprily ka hatramin'ny voalohan'ny volana mey. Antsoina hoe "Herinandron'ny volamena" ity herinandro ity. Ankoatr'izay, misy andro maro miala amin'ny tapaky ny volana septambra ka hatramin'ny faran'ny septambra mandritra ny herinandro. Antsoina hoe "Herinandron'ny volafotsy" ity herinandro ity. Ny fialantsasatry ny sekoly dia manomboka amin'ny faran'ny Jolay ka hatramin'ny faran'ny volana Aogositra. Mariho tsara fa mandritra ireo vanim-potoana ireo dia ho feno olona ny toerana fizahan-tany amin'ny firenena. Fetin'ny Taom-baovao: vavahady Torii 1 janoary tao amin'ny Kuaria Meiji Jingu, Harajuku, Tokyo = Shutterstock Taom-baovao no fialan-tsasatra lehibe indrindra ho an'ny vahoaka Japoney. Betsaka ny olona no hiala sasatra amin'ny 29 Desambra ary handany fotoana miaraka amin'ny ankohonany amin'ny Taom-baovao. Mitsidika toerana masina na tempoly ny olona hivavaka ho an'ny taona vaovao. Tonga ny Andro: ny Alatsinainy faharoan'ny volana janoary Tanora tanora japoney manao kimonos ho an'ny taona, hankalazana ny taona feno roapolo taona = Vehivavy Shutterstock amin'ny kimono ivelan'ny ivon-kolontsaina mandritra ny fankalazana ny Andron'ny Taonan-taona any Kagoshima City, Japan = Shutterstock Amin'ity andro ity dia mankalaza ireo izay 20 taona ny Japoney. Fankalazana ny tanàna maro ho fanomezam-boninahitra azy ireo. Ny tanora dia mitafy Kimono na Suits ary mankalaza ny fahatongavan'ny taona. Andro Fondation National: 11 Febroary Andro iray hankalazana ny fananganana an'i Japon. Araka ny angano taloha, ny Emperora Jinmu, ny amperora voalohany, ...
Hetsika isan-taona ao Japana! Taom-baovao, Hanami, Obon, Noely sy ny maro hafa!
Mbola maro ny hetsika nentim-paharazana isan-taona any Japon. Japoney maro no misafidy ny hankalaza ireo hetsika fanao isan-taona miaraka amin'ny fianakaviany. Vao tsy ela akory izay, mpizahatany vahiny maro no nankafy hetsika toy izany. Amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo hetsika ireo dia azonao atao ny mahazo hevitra tsara momba ny kolotsaina Japoney. Ity lahatsoratra ity dia manome tsipiriany momba ireo hetsika isan-taona. Hetsika Taom-baovao Hetsika isan-taona ho an'ny Taom-baovao no lehibe indrindra eto Japon. Manomboka amin'ny faran'ny taona dia miseho isan-taona ny hetsika manaraka. Joya no kane "Joya no kane" dia hetsika fanao isan-taona atao any amin'ny tempoly bodista = Shutterstock "Joya no kane" dia hetsika fanao isan-taona atao any amin'ny tempolin'ny bodista. Tamin'ny sasakalin'ny 31 desambra dia naneno lakolosy lehibe in-108 ny pretra. Toa misy fanahiana 108 ho an'ny olombelona. Ny dikany ao ambadiky ny lakolosy dia ny fandroahana ireo fahatsapana ireo. Toshi-Koshi soba "Toshi-Koshi soba" dia paty fanao mahazatra amin'ny 31 Desambra. Mihinana paty lava ny Japoney amin'ny fanantenana hanana fiainana tsara vintana. Hatsumode Crowd of Hatsumode at Asakusa in Tokyo, Japan. Hatsumode no fitsangantsanganana Shinto voalohany na fitsidihan'ny tempoly bodista tamin'ny taom-baovao Japoney = Shutterstock "Hatsumode" dia fitsidihana voalohany tamin'ny taona tany amin'ny toerana masina na tempoly. Amin'ny Taom-baovao, ny toerana masina sy ny tempoly dia feno olona maro manao fitsidihana ireo. Setsubun "Setsubun" dia hetsika nentim-paharazana japoney = hetsika Shutterstock "Setsubun" hialana amin'ny faharatsiana. Hotanterahina amin'ny voalohan'ny volana Febroary izany. Manary tsaramaso ao an-trano ny olona rehefa mihira hoe "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," midika hoe "Mivoaka ...
Toetr'andro sy toetrandro isan-taona any Japon! Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido sns.
Rehefa mikasa ny hitsidika an'i Japon ianao, hanao ahoana ny toetrandro sy ny toetr'andro? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny mampahafantatra ny toetrandro sy ny toetr'andro any Japon ary ny endrika isehoan'ny faritra tsirairay. Ny toetr'i Japon dia samihafa i Japon dia vondronosy elipatra manitatra 3000 kilometatra avaratra sy atsimo. Ahitana nosy lehibe 4 ary nosy kely manodidina ny 6,800. Ny toetrandro dia tena tsy mitovy amin'ny avaratra indrindra any Hokkaido sy atsimon'i Okinawa. Mangatsiaka be ny ririnina any Hokkaido, raha somary malemy fanahy kosa i Okinawa na dia amin'ny ririnina aza. Ireo faritra misy oram-panala be amin'ny ririnina dia ny ilan'ny Ranomasina Japan any Hokkaido ary ny lafiny Ranomasina Japan any avaratr'i Honshu. Data: Sampan-draharaha misahana ny toetr'andro any Japan maso ivoho toetr'andro toetr'andro: Toetran'ny oram-panala any Japan amoron-dranomasina any Japan = Shutterstock Tahaka ny hazondamosin'ny nosy, efa ela ny tandavan-tendrombohitra. Noho io tandavan-tendrombohitra io dia samy hafa be ny toetrandro any amin'ny lafiny Pasifika amin'ny vondronosy Japoney sy ny lafiny Ranomasina Japon. Isaky ny ririnina, eo amin'ny lafin'ny Ranomasina Japan, rahona maro mando avy any amin'ny Ranomasin'i Japon no mifandona amin'ireo tendrombohitra. Eto dia milatsaka matetika ny lanezy. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny lafiny Pasifika, hitohy ny toetr'andro mazava amin'ny ririnina. Raha mandeha any amin'ny faritra andrefan'ny tandavan-tendrombohitra ianao mandritra ny ririnina, indrindra ny Hokkaido sy ny avaratr'i Honshu, dia ho hitanao ny tontolon'ny ranomandry. Vanim-potoanan'ny orana any Japon: Manodidina ny volana Jona Vehivavy manao kimono japoney nentim-paharazana mandeha amoron-dàlana voaravaka hydrangea manga (macrophylla) tsara tarehy ...
Horohoron-tany sy volkano tany Japon
Tany Japon, matetika ny horohoron-tany, avy amin'ny horohoron-tany kely tsy tsapan'ny vatana ka misy loza be dia be. Betsaka ny Japoney mahatsapa krizy tsy mahalala hoe rahoviana no hiseho ny loza voajanahary. Mazava ho azy fa ambany ny mety hisehoan'ny loza voajanahary lehibe. Ny ankamaroan'ny olona Japoney dia afaka niaina ho mihoatra ny 80 taona.Nefa kosa, ity fahatsapana krizy ity dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny toe-tsain'i Japana. Tsy afaka mandresy ny natiora ny olombelona. Betsaka ny Japoney mahatsapa fa zava-dehibe ny miaina mifanaraka amin'ny natiora. Ao amin'ity lahatsoratra ity aho dia hiresaka momba ny horohoron-tany tato ho ato sy ny fipoahan'ny volkano. Horohoron-tany tany Japon Raha nijanona tany Japana nandritra ny taona vitsivitsy ianao dia hahita horohorontany kely iray farafaharatsiny. Ny tranobe Japoney dia natao mba tsy hirodana na dia nisy horohorontany mafy aza dia hitranga. Noho izany, tsy tokony hatahotra. Na izany aza, raha nijanona tany Japoney nandritra ny ampolo taona ianao, dia mety hisy tratry ny horohoron-tany lehibe. Tamin'ny taona 2011, rehefa nisy ny horohorontany tany Great East Japan dia niasa tao amin'ny skyscraper tao Tokyo aho ary nahatsapa ilay tranobe nihorakoritra mafy. Loza mahery tany Jeneraly atsinanana Atsinanana Jeneraly ny horohoron-tany lehibe tany Japon, 11 martsa 2011 Ilay horohoron-tany lehibe tany Atsinanana Japoney (Higashi-Nihon Daishinsai) dia horohoron-tany lehibe iray izay namely ny avaratr'i Honshu tamin'ny 11 martsa 2011. Maherin'ny 90% amin'ireo traboina manodidina ny 15,000 eo ho eo maty noho ny tsunami nitranga taorian'ilay horohorontany. Taorian'ny horohoron-tany lehibe tany Hanshin nitranga tamin'ny 1995, dia nisy fananganana horohoron-tany vokatry ny horohoron-tany ...
Inona no tokony hatao raha misy rivo-doza na horohorontany tany Japon
Na any Japon aza dia mihamitombo ny fahasimbana ateraky ny rivo-doza sy orana mivatravatra noho ny fiakaran'ny tany. Ankoatr'izay, ny horohoron-tany matetika no mitranga any Japon. Inona no tokony hataonao raha misy rivo-doza na horohoron-tany mitranga rehefa mandehandeha any Japon ianao? Mazava ho azy fa tsy dia mifanena amin'ny tranga toy izany ianao. Na izany aza, tsara ny mahafantatra ny countermeasures raha sendra misy maika. Ka eto amin'ity pejy ity aho dia hiresaka momba izay tokony hatao rehefa misy loza voajanahary ao Japana. Raha tratran'ny rivo-doza na horohoron-tany lehibe ianao izao, download ny fampiharana apetraky ny governemanta Japoney "toro-hevitra momba ny fiarovana". Amin'izay no ahazoanao ny fampahalalana farany indrindra. Na izany na tsy izany, ataovy izay hahazoana antoka fa manana toeram-piarovana azo antoka ianao. Miresaha amin'ny japoney manodidina anao. Na dia izany aza, amin'ny ankapobeny ny olona japoney dia tsy dia mahay miteny anglisy, raha manana olana ianao dia mbola te hanampy. Raha afaka mampiasa kanji (mpilalao sinoa) ianao dia afaka miresaka aminy toy izao. Mahazoa vaovao momba ny toetr'andro sy ny horohoron-tany tamin'ny rivo-doza ririnina nihatra teo amin'ny seranam-piaramanidina Okinawa = shutterstock Jereo tsara ny vinavinan'ny toetr'andro. Nampandrenesin'ny mpandeha avy any ampitan-dranomasina aho fa "ny Japoney dia toa ny vinavinan'ny toetrandro." Azo antoka fa arahinay saika isan'andro ny toetr'andro. Izany dia satria miova isaky ny isaky ny fotoana ny toetr'andro Japoney. Japana dia manana fiovana ara-potoana ary koa ny rivo-doza matetika manomboka ny fahavaratra ka hatramin'ny fararano. Ankoatra izany, vao haingana, ny fahasimban'ny orana mivatravatra dia nitombo noho ny vokatry ny fiakaran'ny hafanana eran-tany. Ankoatr'izay, ny horohoron-tany sy ny fipoahana volkano dia mitranga matetika ao Japon. Raha mandeha any Japon ianao dia, ...
Emperora ao Japon sy ny sainan'ny japoney
Rehefa mandeha any Japon ianao dia mety hahatsapa fahafinaretana lalina kokoa raha toa ka nanana fahalalana fototra momba ny tantaran'ny Japoney. Ity pejy ity dia hanisy famintinana fohy ireo Emperora manan-danja amin'ny tantaran'ny Japoney. Ho fanampin'izay, hampiditra fampahalalana momba ny sainam-pirenena Japans aho. Emperoran'i Japana Fahitana ny lapan'ny mpanjaka, Tokyo. Japan = Shutterstock Nampiasa ny Emperor System hatramin'ny taloha i Japon. Ny amperora dia antsoina hoe "Tenno" amin'ny teny Japoney. Araka ny angano, ny amperora voalohany dia Emperor Jinmu. Voalaza fa satroboninahitry ny Emperora Jinmu tamin'ny taona 660 talohan'i Kristy saingy tsy azo antoka izany. Ny fifandimbiasana eo amin'ny seza fiandrianana dia notantanan'ny lova nandritra ny fotoana ela. Tamin'ny lalàm-panorenana taloha napetraka tamin'ny taona 1889, dia Mpanjaka ny Emperora. Saingy, tamin'ny lalàm-panorenana vaovao napetraka tamin'ny 1946, dia nomena fahefana hanjaka ny olom-pirenena ary nanjary "tandindona" ny Emperora. Androany, ny Royal Family, mifantoka amin'ny Emperora, dia manao asa an'ohatra. Ity asa ity dia misy ny fanatrehana hetsika any ivelany sy iraisam-pirenena. Ny Royal Family dia manao "Ippan Sanga" indroa isan-taona mba hiarahabana ny besinimaro ao amin'ny Imperial Palace of Tokyo. Izany dia nitranga tamin'ny 2 Janoary sy 23 Desambra. Amin'izao fotoana izao, maro ny olona tonga ao amin'ny Imperial Palace mba hijery maso manokana ny fianakaviana, Lahatsary Recommended momba ny Emperora Japoney Sainam-pirenena Japoney Sainan'ny Japoney antsoina hoe "Hinomaru ". Boribory mena lehibe no sarina eo ambadika fotsy. Ny faribolana mena dia maneho ny fiposahan'ny masoandro. Nivavaka tamin'ny masoandro ny Japoney ...
Sary: Andro mafana any Japon -Ny fotoanan'ny orana dia jona, septambra ary martsa
Sary: Tempolin'i Sensoji any Asakusa, Tokyo
Saripika: Ny maherin'ny Tempolin'i Rurikoin any Kyoto
Oktobra tany Japon! Manomboka amin'ny fararano tendrombohitra ny ravina fararano!
Saripika: Kolontsaina volontany japoney-Ala Arak'ahitraArashiyama, sns.
Saripika: Tempolin'i Daitokuji ao Kyoto -An'izao tontolo izao amin'ny Zen ao Harmony miaraka amin'ny Natiora
Sary: Tempolin'i Kodaiji any Kyoto
Janoary tany Japon! Andao hankafy ny ririnina any Japon!
Saripika: Hanamiyama Park ao amin'ny Prefektur Fukushima
Manaova drafitra fitsangatsanganana
Ny drafitra rehetra dia fitsangatsanganana Rahoviana no handeha (16) Alimanakan'ny hetsika (15) Toetrandro sy toetrandro (65) Fitsangatsanganana tsara indrindra (30) Fonenana (3) Tapakila sy fitsangantsanganana (2) Fifandraisana (11) Akanjo (6) fiteny (1) Vola (1) Fotoana tsy fitoviana (1) Internet (1) Fanesorana (3) Mianara (83) Fiainana sy kolontsaina (71) Tantara (4) Tranonkala mifandraika (7)
Ny faritra rehetra Hokkaido (62) Honshu: Tohoku (47) Prefektioran Aomori (9) Akita Prefecture (11) Iwate Prefecture (5) Miyagi Prefecture (5) Yamagata Prefecture (5) Fukushima Prefecture (8) Honshu: Kanto (81) Tokyo (31) Tokyo Metropolitan (5) Kanagawa Prefecture (8) Chiba Prefecture (4) Saitama Prefecture (3) Ibaraki Prefecture (8) Gunma Prefecture (6) Prefektioran'i Tochigi (7) Honshu: Chubu (66) Prefektioran'i Shizuoka (6) Prefektioran'i Yamanashi (11) Prefektioran'i Nagano (15) Nigata Prefecture (4) Toyama Prefecture (7) Ishikawa Prefecture (7) Fukui Prefecture (4) Gifu Prefecture (13) Prefektioran Aichi (3) Mie Prefecture (5) Honshu: Kansai (78) Shiga Prefecture (6) Kyoto (33) Prefektioran'i Kyoto (2) Nara Prefecture (6) Wakayama Prefecture (4) Osaka (7) Osaka Prefecture (4) Hyogo Prefecture (8) Honshu: Chugoku (33) Okayama Prefecture (6) Prefektioran'i Hiroshima (11) Yamaguchi Prefecture (2) Prefektioran'i Tottori (4) Shimane Prefecture (8) Shikoku (17) Prefektioran Tokushima (5) Kagawa Prefecture (4) Ehime Prefecture (3) Kochi Prefecture (1) Kyushu (37) Fukuoka Prefecture (5) Saga Prefecture (1) Prefektioran'i Nagasaki (7) Kumamoto Prefecture (8) Oita Prefecture (8) Prefektioran'i Miyazaki (3) Prefektioran'i Kagoshima (3) Okinawa Prefecture (13)
Izay rehetra misy fitiavana Tapakila sy fitsangantsanganana (2) Lamaody (8) Fiantsenana (14) Sakafo Japoney (15) Toeran-dranomandry (77) Cherry Blossoms (34) Voninkazo (32) Saha zaridaina (16) Ravina fararano (54) Onsen (22) Biby sy trondro (10) Hiking (67) Scenic Rides (29) Fialamboly (6) Fijery amin'ny alina sy ny fahazavana (39) Fetibe (23) Tempoly sy Shrines (51) Castles (33) Toerana manan-tantara (59) Samurai & Ninja (14) Asa tanana nentim-paharazana (5) Tranombakoka (8) Manga & Anime (7) Ranomasina (11) Fanatanjahan-tena (14) Indostria sy varotra (8) Fitaterana (12)
andro rehetra izany Ririnina (52) Desambra (18) Janoary (15) Febroary (18) Lohataona (47) Mey (13) Martsa (12) Aprily (17) Fahavaratra (37) Jona (12) Jolay (16) Aogositra (15) Fararano (47) Septambra (16) Oktobra (16) Novambra (17)
Tags rehetra Abashiri (1) Aizu-Wakamatsu (2) Akihabara (4) Aomori (3) Arashiyama (4) Zoo Asahiyama (1) Asakusa (3) Ashikaga Flower Park (3) Aso (5) Beppu (6) Biei (19) Tempolin'i Chusonji (3) Daisetsuzan (5) Dotonbori (1) Museum Edo-Tokyo (2) Tempolin'i Eikando Zenrinji (4) Enoshima (3) Fuji-Q Highland (2) Fukuoka (3) Furano (17) Fushimi Inari-taisha Shrine (4) Ginza (3) Ginzan Onsen (4) Gion (1) Hakodate (16) Hakone (4) Hakone Open-Air Museum (1) Hakuba (6) Tempolin'i Hasedera (1) Himeji lapa (4) Tranombakoka fahatsiarovana an'i Hiroshima (4) Hitachi Seaside Park (4) Huis Ten Bosch (1) Lapan'ny mpanjaka (2) Ise Grand Shrine (2) Ise Shrine (1) Izumo Taisha (5) Jigokudani Snow Monkey Park (3) Kaiyukan (1) Kakunodate (5) Kamakura (6) Kamikochi (5) Kanazawa (5) Kenrokuen Garden (6) Tempolin'i Kinkakuji (4) Tempolin'i Kiyomizudera (7) Kobe (3) Koyasan (4) Castle Kumamoto (2) Kumano Kodo (4) Lake Kawaguchiko (2) Matsumoto Castle (4) Kuantanin'i Meiji-jingu (4) Miyajima (10) Mt. Fuji (13) Mt. Takao (3) Mt. Yoshino (4) Nabana no Sato (3) Nagasaki (3) Nara Park (4) Nikko (1) Nikko Tosho-gu (4) Niseko (7) Odaiba (2) Oirase stream (3) Okinawa (9) Castle Osaka (3) Otaru (14) Oze (4) Nosy Sakurajima (2) Sapporo (22) Sendai (3) Tempolin'i Sensoji (3) Shibuya (2) Shinjuku (4) Shinjuku Gyoen National Garden (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) Takayama (4) Tateyama Kurobe Alpine Route (6) Tempolin'i Todaiji (4) Tokyo Disney (1) Museum Nasionaly Tokyo (2) Tokyo Skytree (3) Tokyo Tower (3) Ueno (1) Umeda (1) USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) Zao (5)
Azafady tsindrio "Alefaso" aorian'ny fisafidianana
Mandehana any amin'ny "sary"
Hokkaido! Toerana malaza amin'ny mpizahatany malaza sy seranam-piaramanidina 21
I Hokkaido no nosy lehibe faharoa ao Japana taorian'ny Honshu. Ary ny farany avaratra sy prefecture lehibe indrindra. Mangatsiaka noho ny nosy hafa any Japon i Hokkaido. Satria nahemotra ny fampandrosoana ny Japoney, misy toetra lehibe sy tsara tarehy ao Hokkaido. Eto amin'ity pejy ity, hampahafantariko ny drafitra ...
Tendrombohitra Fuji: toerana 15 mijery tsara indrindra ao Japana!
Eto amin'ity pejy ity, hasehoko anao ny fomba fijery tsara indrindra hahitanao ny Mt. Fuji. Mt. Fuji no tendrombohitra avo indrindra any Japon izay misy haavony 3776 metatra. Ao no misy ny faritany nataon'ireo volkano Mt. Fuji, ary mamorona tontolo tsara tarehy manodidina izany. Raha te hahita ...
Jeneraly Onsen no nanoro hevitra indrindra ho an'ireo mpizahatany vahiny
Satria firenena iray manana volkano be dia be i Japon, mafana ny rano ao anaty rano, i Onsen (loharano mafana) no mivoaka eto. Amin'izao fotoana izao, voalaza fa misy faritra spa ho any 3000 any Japon. Anisan'ireny ny toerana be mpitia ny mpizahatany vahiny. Tamin'ny ...
Tempoly sy rarano tsara indrindra any Japon! Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji, sns.
Betsaka ny toerana masina sy tempoly any Japon. Raha mandeha any amin'ireo toerana ireo ianao dia azo antoka fa hahatsiaro ho tony sy hamelombelona. Misy haingo sy trano tsara tarehy tianao tianao alefa amin'ny Instagram anao. Eto amin'ity pejy ity, aleo ampahafantariko ny sasany amin'ireo toerana masina sy tempoly malaza indrindra ...
Vanim-potoana ao Japon! Kolontsaina nitaiza ny fanovana ireo vanim-potoana efatra
Misy fanovana vanim-potoana mazava tsara ao Japon. Tena mafana be ny fahavaratra, fa tsy haharitra mandrakizay ny hafanana. Nihena tsikelikely ny mari-pana ary lasa mena sy mavo ny ravina eo amin'ny hazo. Amin'ny farany, ririnina mafy no hanaraka. Ny olona miaritra ny hatsiaka ary miandry ny hahatongavan'ny lohataona mafana. Ity ...
Copyright © Best of Japan , 2022 Zo rehetra voatokana.